Ngaba ikhona i-Amazon eyimfuneko yeeprosoft software ezixhobo zokuqala?
Kuye kwaziwa kakade ukuba ukusingatha uphando olungundoqo lwegama eliphambili liphakathi kweengxenye eziphambili ze-Search Engine Optimization (SEO) kunye nomxholo wanamhlanje wokuthengisa ngeDavidi kunye ne-Ecommerce shishini, ngokwenene uyayinakucala apho uthengisa khona kude. Ezinye iingcali ze-SEO zithi "umxholo uyinkosi. "Yaye loo nto ayiyiyo ingqiqo kuphela ekuphuculweni kokuqala kweenjini ezinjengeGoogle ngokwayo, kodwa kumashishini okuthumela amanqaku kunye nakwiyiphi na iprojekthi ye-intanethi ejongene nokuthengisa i-intanethi, njenge-Amazon. Yaye makhe sijamelane nayo - kufuneka ukuba ungabikho kumbuzo othi abathengisi abaqalayo kwi-Amazon bafuna iprojekthi yegama elingundoqo kunabo bonke.
kwaye kungekhona nje ukuhlala ngaphandle kwabadlali be-niche kwaye uqale ukwakha idumela kunye negunya njengabahwebi abaphumelelayo ukuthenga. Into yokuba akukho mntu unokukwazi ukusinda kuloo nqanaba elincinci lokuncintisana kwemakethi, ngaphandle kokuba ixhaswe nge-right ye-software yegama elingundoqo le-Amazon, abancedisi bokulandelela kunye nezixhobo zokubiza ukugcina uluhlu lwemveliso luhlaziywa. Ekugqibeleni - ukuphumelela ibhokisi yokuthenga kwaye uhlale phakathi kwezinto eziphezulu eziveziweyo ezithengiswa ngaphaya kwalo.
Ngoko ke, ekuqwalaseleni ukuba uphando lwegama eliphambili ngokwalo, kunye neengcebiso zalo zokubambisana ezinomsila, ziyimfuneko ebalulekileyo kunokuba nayiphi na i-luxury. iindlela eziqhelekileyo zokukhetha kulula kodwa ukwenza ngokuqinisekileyo i-Amazon yegama eliphambili leprojekthi yezixhobo zabasebenzisi bokuqala. Ngethemba uya kufumana i-kickstart enhle kunye nabo, ngokuqinisekileyo ngaphandle kokuchitha ipenny, njengoko nganye kwezi zixhobo ezilandelayo ze-i-keyword ze-Amazon zixhobo zifumaneka kwindawo evulekile kwiWebhu, okanye ubuncinane isiseko sabo.
Ingabonakala ngathi ayikho i-brainer, kodwa esi sikhokelo esisisiseko esisetyenziselwa isabelo seengonyama ze-SEOs esikolweni esidala singakhonza nabathengisi be-novice e-Amazon njengegama elingundoqo. isofthiwe esebenza ngokwenene. Into leyo kukuba isisombululo esisisiseko sikhulu kakhulu kubaqalayo. Ingundoqo kuba le toolkit engapheliyo ye-giant search world is good for you to give you a picture that shows all your potential search winning terms and long-tail combination, inqanaba labo langoku ukhuphiswano (ngaphandle koko, kunzima kangakanani la magama angundoqo ukuba athathele) , kunye nemilinganiselo yokukhangela yemilinganiselo ejolise kuyo. Kwaye akukho mfuneko yokuthi idatha ehlinzekwe yi-Google kufuneka ibe yinkalo ebanzi kwaye mhlawumbi ibe yinkcenkceshe, idibene ndawonye kungekuphela kwendawo yokuthengisa (njengama-Amazon, eBay, iWalmart, njl. ), kodwa iqokelelwe kuyo yonke inkcazo yosesho ekhoyo kwi-Intanethi.
Khawucinge ngoluhlu oluthile lweenzuzo eziphambili ezinikezwa yi-Google Word Keyner Planner xa zisetyenziswe kwi-software ye-Amazon. ukufumana uluhlu lwemveliso yakho lubekwe kwigama elitshixo elingundoqo okanye ukudibanisa kwexesha elide. Ngenisa nje isiqhelo esisezantsi, nayiphi na ibinzana leemeko, uluhlu lwemveliso, iwebhusayithi, okanye umenzi - kwaye uyenziwe.
Yiba nomfanekiso omkhulu wevolumu yokukhangela nayiphi na imveliso ekhethiweyo yomkhiqizo okanye mhlawumbi ekuphumeleleni ukuhlanganiswa kophando osetyenziswa ngabasebenzisi abaphilayo emhlabeni wonke.
Yandisa ezininzi uluhlu oluphambili lwezinto eziphambili kunye neenkcukacha eziphambili ezijoliswe kakuhle ngokufumana ingqiqo ebalulekileyo kunye neempendulo zelungu eliphambili leelwimi.Futhi ungakulibali ukuba i-Google Wordwordner Planner iyona thuba le-goldmine ithuba lokuba uqaphele ngokukhawuleza indawo yakho eyithembisayo yegama elijoliswe kwindawo (i. e. , isixeko, urhulumente kunye nelizwe).
Igama eliphambili le-Spy Research Tool
Ngokungafani namanye amathuluzi eprojekthi ye-keyword ye-Amazon, i-toolkit iyonke ihlose ukukunika ingqiqo ecacileyo yegama-ibambe ngqo kwii-niche zakho , okanye iqokelelwe kwizinto eziphumelele kakhulu ekuthengiseni kwenye indawo kwiWebhu. Ukuba neefayile ezisisiseko kunye nokuhlawula i-fat-full version, i-Keyword Spy iyisisombululo esihle kakhulu kubathengisi abaqalayo ukuba baqikelele ngokukhawuleza umthamo wokukhangela kwanoma yiliphi igama elingundoqo, ngokuhambelana nokunika ipakethe enkulu enxulumene nophando kunye nokubonisa yonke imisila ende. ukudibanisa (kunye neenkcukacha zegama elikhethiweyo le-LSI) ukhuthazwa ukuba ubeke isithuba.
I-SEMrush yegama elingundoqo elingundoqo
Esi sikhokelo sokuqala se-SEO sinesixhobo sesevisi yaso, esingaba lula sakho esinye isisombululo xa sikhetha ukukhetha ilungelo I-software yegama elingundoqo le-Amazon. Phakathi kwamacandelo akhe anamandla, ezi zilandelayo ziphumo zophando olunzulu lwegama eliphambili lubonakala luhle kakhulu: ukubeka ubunzima bokulinganisela nayiphi na igama eliphambili, ukuhlolwa kwevolumu yenyanga yokukhangela, ukuphathwa kwezithuthi ze-PPC, uphando lokhuphiswano kunye nokuhlalutya kwezithuthi zakho kwiimarike zakho.
Esi sihloko esichazayo sibizwa ngegama elisebenzisekayo elisezantsi le-software yegama le-Amazon. Ewe, i-Keyword Tool ayikho incedisi yegama elingundoqo, kodwa iqonga elipheleleyo le-intanethi elinikeza ingcaciso yesiqhelo yamahhala efumanekayo kubathengisi bee-Amazon ukuba bafumane amagama abalulekileyo ayenzayo kunye nemigca yokukhangela imilenze yezinto zabo zokwenza uluhlu. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba ufumanise ezinye izinto eziphambili kwaye ezikhohlisayo kweli qonga, abathengisi abaninzi abanamava amaninzi athengisa kwi-Amazon baya kufuna ukuhlawula i-version yayo ephakamileyo eyaziwa njengegama elingundoqo leNkqubo Pro.
I-KwFinder Uluhlu loPhando
KwFinder yi-software yokugqibela ye-software yegama elingundoqo ye-Amazon Ndingathanda ukukubonisa namhlanje. Olu khetho luya kulungeleka xa lufika ekuveleni izihlwele zokunqoba amagama angundoqo omsila kunye nemigca yokukhangela yemveliso efumana ukuthandwa phakathi kwabathengi abaphilayo kude kube kude. I-KwFinder inceda ngokulinganayo nje nge-Amazon ngokwayo, kodwa ezinye iiplani eziqingqiweyo ze-ecommerce (njenge-eBay, iWalmart, i-Alibaba esitolo, njl njl.), kunye nezinye izinto, nakweendawo ezingathengiswanga, njengeenkonzo ze-YouTube zokubamba ividiyo, yewebhu yesibini evakatyeweyo. Emva koko, ndifumene i-KwFinder ngakumbi kunenzuzo, ngokukodwa kwimiba ephathekayo efana nenkqubo elula yokukhetha ikhophi, kunye nezinye iziphakamiso ezisetyenzisiweyo ezisuka kwi-semantic indexing. imibuzo nganye ngegama eliphambili elifunekayo, kunye nobunzima balo bunzima Source .